Ramamimampionona Gérard: “Mba ho ao anatin’ny firahalahiana ny fifidianana” | NewsMada
Ramamimampionona Gérard: “Mba ho ao anatin’ny firahalahiana ny fifidianana”
Hanao ahoana ny fifidianana? Na ny fampielezan-kevitra aza… “Mba ho ao anatin’ny firahalahiana ny fifidianana”, hoy Ramamimampionona Gérard.
“Na firy na firy kandidà ho filohan’ny Repoblika eo, na 40 na 50: iray ihany no ho voafidy. Ahoana izany ireo tsy voafidy? Isika Malagasy, manana ny toetra tsy manaiky ho resy indraindray.” hoy ny filoha lefitry ny CFM, Ramamimampionona Gérard, momba ny tokony hanaovan’ny fifanarahan’ny samy kandidà filohan’ny Repoblika mba hisian’ny fitoniana amin’nyfifidianana.
Rehefa mazava ny fitsipi-dalao amin’ny fifidianana, mazava ary hita ny zava-drehetra, ary nandray andraikitra tsara ny tena: inona indray no tokony hampimenomenona ka hitroatroatra rehefa avy eo? Anisan’ny tena mitarika fikorontanana hatrany ny fifidianana, na mialoha na mandritra na aoriana indrindra. Manana andraikitra moraly amin’izany ireo kandidà hiditra ao anatin’ny fifidianana.
Zava-dehibe ny fifanarahana
“Izay no mahazava-dehibe ny hoe: aleo mihaona, ary mametraka zavatra iray iraisana mba ho amin’ny filaminan’ny firenena”, hoy izy. Tsy maintsy alohan’ny fanombohan’ny fampielezen-kevitra ny fifanarahana: karazana sata ho amin’ny fitoniana. Ao anatin’izany, ny hoe: inona ny andraikitry ny tsirairay, ny torohevitra mifanitsy amin’izany…
Tsy ao anatin’ny lalàna izany, fa eo amin’ny lafiny moraly. Eo koa ny soatoavina maha Malagasy, ny fifanajana… Efa tokony ho hita ao anatin’ny fampielezan-kevitra izany hoe lalao ao anatin’ny firahalahiana no hanatanterahana ny fifidianana, fa tsy hoe hifandrafy sy ho mpifahavalo ka tsy hanaiky izay resy eo. Olona hitondra ny tany sy ny fanjakana izany, vao miandoha dia efa tokony ho hita taratra hoe raiamandreny, mandala ny soatoavina malagasy.